Tuesday February 18, 2020 - 13:52:00 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Janeraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa waxaa uu xilkii ka qaadey Taliyihii Saldhigga Ciidanka Booliska degmada Wadajir Cabdi-baasid Maxamuud Cagey.
General Xijaar ayaa u magacaabay taliyaha cusub ee Saldhigga Booliska degmada Wadajir Saciid Cali Maxamuud oo kamid ah Saraakiisha Ciidamada Booliska Soomaaliyeed.
Illaa hadda la ma oga sababta keentay in xilka laga qaado taliyaha saldhigga ciidamada Booliska degmada Wadajir hase yeeshee waxaa la sheegay in ammaan darro ka soo cusboonaatay degmada awgeed xilka looga qaaday taliyaha.
Xil ka qaadista lagu sameeyay taliyaha saldhiga booliiska Wadajir ayaa la sheegay in sabab u aheyn madaafiic shalay laga tuuray gudaha Degmada Wadajir oo lagu weeraray xarunta Xalane ee ku dhagan garoonka Aadan Cadde.
Sida aan wararka ku helnay taliyaha xilka laga qaaday ayaa sidoo kale booliiska waxa ay su’aalo ka weediinayaan sida ay ku dhacday in gudaha degmada Wadajir maalin cad madaafiic Al Shabaab ka tuuraan kana baxsadaan.
Xil ka qaadista sargaalkan katirsan booliiska Soomaaliya ayaana sabab waxaa u noqday dagaalyahanada Al Shabaab oo xili dharaar cad ah degmada Wadajir ka tuuray tiro hoobiyaal ah ay ku weerareen xarunta Xalane.
Al-shabaab ayaa warar ay ku qoreen barahooda Internet-ka ayaa waxaa ay ku sheeteen Mas’uuliyada weerarkii shalay madaafiicda ahaa ee lagu qaaday Xerada Xalane ee Magaalada Muqdisho.